Dhacdo argagax leh oo xalay ka dhacday gobolka Sh/dhexe iyo mas’uuliyiinta halkaasi oo ka hadashay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dhacdo argagax leh oo xalay ka dhacday gobolka Sh/dhexe iyo mas’uuliyiinta halkaasi oo ka hadashay
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dhacdo argagax leh oo habeenkii xalay ka dhacday deegaanka Biya-cadde ee gobolka Sh/dhexe, kadib markii ciidamo ka tirsan Al-shabaab ay dileen sedax qof oo la sheegay inay kala ahaayeen wiil iyo aabihiis iyo sidoo kale nin Oday ahaa oo xilligaasi usoo martiyay qoyskaas dilka loo geystay.
Kooxda dilka ka geysatay deegaanka Biya-cadde ayaa la sheegay inay ahaayeen 9 qof oo wejiyada soo xirtay islamarkaana loo maleynayo in ka tirsan yihin Xarakada Al-shabab.
Aabaha la dilay ayaa sida la sheegay lagu magacaabi jiray Cisman Cabdi Haruur, halka wiilkiisana lagu magacaabi jiray Cadaay Cismaan Cabdi, waxaana labadaas ruux lala dilay Oday marti u ahaa cidda oo isna lagu magacabi jiray Xaaji Cali Taakoow.
Ilaa iyo haatan lama oga sababta ka dambeysa dilka loo geystay seddaxdaasi ruux, inkastoo dilkaasi uu qeyb ka yahay dilalka baahsan oo ay Al-shabaab u geystaan dadka reer miyiga ah.
Dhinaca kale, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe oo gaaray goobta uu falkaasi naxdinta leh ka dhacay ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo dadkii falkaasi ka dambeeyay, waxayna sidoo kale sheegeen in meydka seddaxdaas qof maanta la aasi doono.